Umatshini we-CNC wokugaya, iZiko leMachingwe le-Vertical, i-3 kunye ne-4 axis, uMthengisi wase China
Ulapha: Ekhaya1 / Umatshini wokugaya i-CNC, iZiko leMaching Vertical, 3 & 4 axis, China S ...
UKUGCINWA KAKHULU KWEZIMOTO
imigaqo kunye nomfanekiso
Cnc iziko maching650
Itafile szie: 900 * 400mm
Ukuhamba: 600 * 400 * 500mm
Imoto ephambili: 5.5kw
Cnc iziko maching850
Itafile szie: 1000 * 500mm
Ukuhamba: 800 * 500 * 500mm
Imoto ephambili: 7.5kw
Cnc iziko maching855
Itafile szie: 1000 * 550mm
Ukuhamba: 800 * 550 * 550mm
Cnc umshini wokugaya 736
Itafile szie: 1250 * 360mm
Ukuhamba: 900 * 400 * 500mm
Cnc iziko lokwenza imishini 1160
Itafile szie: 1200 * 600mm
Ukuhamba: 1100 * 600 * 600mm
Imoto ephambili: 11kw
Cnc iziko maching1270
Itafile szie: 1360 * 700mm
Ukuhamba: 1200 * 700 * 600mm
Imoto ephambili: 15kw
Cnc iziko maching1370
Ukuhamba: 1300 * 700 * 600mm
Cnc iziko maching640
Itafile szie: 1000 * 360mm
Ukuhamba: 600 * 360 * 450mm
Imoto ephambili: 3.7kw
Cnc umshini wokugaya 720
Itafile szie: 600 * 200mm
Ukuhamba: 300 * 200 * 300mm
Imoto ephambili: 1.1kw
Ukuba ufuna ukuqhubekisa inqwelomoya (inqwelomoya ethe tyaba, inqwelomoya ethe nkqo), indawo yokuhamba (isitshixo, i-t-slot, i-dovetail slot, njl.njl.), Izahlulo zamazinyo ezahlukileyo (igiya, ispline shaft, indawo ejikelezayo), umngxunya ongaphakathi, zonke iintlobo zegophe umphezulu, uveliso oluqinileyo lotshintsho kunye nokusika ukusika, umatshini wethu wokugaya i-CNC uya kuba ngumatshini wokugaya oqinisekileyo.Umatshini wokugaya we-CNC usetyenziswa kakhulu kwiindawo zeemoto, izixhobo zombane, izithuthuthu, izixhobo, izixhobo zekhompyutha, iimoto kunye nezinye iinkalo.
Ukukhetha umshini wokugaya i-CNC ikakhulu kuxhomekeke kubude bendawo yokusebenza, ubungakanani kunye nemowudi yokuqhubekeka, yokuqhubekeka ngokuchanekileyo, ibhetshi encinci kunye naphakathi kwaye amaxesha amaninzi imveliso ephindaphindwayo, ukusetyenziswa komatshini wokugaya we-CNC kufanelekile kakhulu, ukuba iindawo ezinkulu Umatshini wokugaya kunye nenqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo uthatha indawo yomatshini wokugaya oqhelekileyo, ukunciphisa ukusebenza komqeshwa, umkhwa ophakamisa imveliso awunakuphepheka. umthombo, ogqityiweyo kwiinkcukacha, wamkelekile ukubuza.
Umboniso we-CNC umshini wokugaya
Ukuqina okuphezulu, uzinzo oluphezulu, isantya esiphezulu
(Sitshele iimfuno zakho, siza kukucaphula ngaphakathi kweeyure eziyi-12)
Yintoni na umshini wokugaya CNC?
Umatshini we-CNC wokugaya izixhobo zokugaya ezizenzekelayo, unokuqhuba umsebenzi ongalondolozwanga. Le workpiece kunokuba wokugaya, ukubhola, uyadika, reaming, uthinte kunye nezinye iinkqubo emva nokubotshwa enye kuphela. Ngokwemilo, ubungakanani, ukuchaneka kunye nokuchaneka komphezulu weenxalenye kunye nezinye iimfuno zobuchwephesha zokuphuhlisa inkqubo yokulungisa, khetha iiparameter zokulungisa. Ngokusetyenziswa kwenkqubo yesandla okanye inkqubo ezenzekelayo usebenzisa isoftware yeCAM, inkqubo yokuqhubekeka ecwangcisiweyo ligalelo kumlawuli. Intshukumo yokunyusa ngokwamanyathelo iyalungiswa ukunyusa indawo yokusebenza kunye nokulungelelanisa umsiki, intshukumo eqhubekayo okanye ivili lesandla ukuhambisa isixhobo somatshini. Cwangcisa indawo yokuqala ekuqaleni kwenkqubo kwaye usete isixhobo somgangatho. Emva kokulawulwa kwenkqubo, umlawuli uhambisa imiyalelo kwisixhobo se-servo. Isixhobo se-servo sithumela umqondiso wolawulo kwi-servo motor. I-motor yokuluka yenza isixhobo sijikeleze, kwaye iservo motor kwi-X, Y kunye no-Z ulwalathiso lwendlela yokuhamba kwesihlobo sesixhobo kunye ne-workpiece ngokungqinelana nomkhondo othile, ukuze kuqondwe ukusikwa kwendawo yokusebenza.
Ukuchaneka okuphezulu komhlaba kunokunyusa i-axis yesine, kwiqonga elihambayo ukongeza ukujikeleza kwe-360-degree kwintloko yokwahlula kombane, ukuze ikwazi ukwenza umngxunya wesahlulo esizenzekelayo, ukugaya i-bevel kunye nezinye iindawo ezintsonkothileyo zomgangatho ophezulu wokuchaneka, ngaphandle kokuphulukana nokuchana ngokuthe ngqo kwesekondari.
Ukuchaneka komatshini we-CNC wokuchaneka, okufanelekileyo kunye nokusebenza kakuhle, sisiqwenga esibalulekileyo sezixhobo zokugaya isinyithi ngokuchanekileyo.
Iintlobo ze-CNC umshini wokugaya
1, Ngokwe ndlela yokuluka ye-axis ye-axis yahlulwe yaba ngumatshini wokugaya we-CNC, umatshini wokugaya we-CNC othe tyaba, umatshini wokugaya we-CNC, umatshini wokugaya we-CNC othe nkqo.
2, Ngokutsho komsebenzi wokusebenza yahlulwe kumatshini oqhelekileyo wokugaya we-CNC, umatshini wokugaya we-CNC, umatshini wokukhuphela we-CNC.
I-3, Ngokwenani le-axis yolawulo yahlulwe yangamatshini e-axis e-CNC, ii-axis ezintathu ze-CNC zoomatshini bokugaya, ii-axis ezimbini ze-CNC oomatshini bokugaya, oomatshini be-CNC abaninzi be-CNC.
4, Ngokwendlela yolawulo lwenkqubo ye-servo yahlulahlulwe yaba ngumatshini wokugaya ovulekileyo we-servo, umatshini wokulawula inkqubo ye-servo evaliweyo, inkqubo ye-servo evaliweyo evaliweyo
Ukusetyenziswa CNC umshini wokugaya
Kusebenza koomatshini bezemigodi, izithuthi, i-aerospace, ukushicilela, ukupakisha, ishishini lezomkhosi, ukungunda, ukuhambisa, oomatshini bempahla, oomatshini bezolimo, imigodi yentsimbi, ukuvelisa isixhobo somatshini kunye nezinye izixhobo eziphambili.
I-CNC isakhiwo somatshini wokugaya, izixhobo
Iziko lokuqala machining ehlabathini wazalelwa eUnited States ngo-1958. Inkampani e-United States wongeze isixhobo ukutshintsha isixhobo kumatshini CNC ekruqulayo kunye wokugaya, nto leyo ebonisa ukufika iziko lokuqala machining. Kule minyaka ingama-40 idlulileyo, kuye kwakho iintlobo ngeentlobo zamaziko okwenza izinto ngomatshini. Nangona zinemilo eyahlukeneyo kunye nolwakhiwo, zihlala zenziwe zezi ndawo zilandelayo.
1. Izinto ezisisiseko
Yenziwe ngebhedi, ikholamu kunye ne-worktable, eziyinxalenye esisiseko yesakhiwo seziko. La malungu makhulu abandakanya ukulahlwa kwentsimbi kunye neentsimbi ezakhiweyo. Kuya kufuneka bathwale umthwalo we-tuli we-machining center kunye nomthwalo wokusika ngexesha lokuchwetheza. Ke ngoko, kufuneka babe nokuqina okuphezulu kakhulu, kwaye ikwangamalungu anobunzima obukhulu kunye nevolumu kwiziko lokuchwetheza.
2. Izixhobo zokuluka
Yenziwe ngebhokisi yokuluka, imoto yokuluka, othini kunye nothango lokuluka. Ukuqala, ukumisa, kunye nokujikeleza kwesantya sokujija kulawulwa yinkqubo yolawulo lwamanani, kwaye ukusika kwenziwa sisixhobo esifakwe kwisixhobo sokuluka. Icandelo lokuluka licandelo lokuvelisa umbane kunye neyona nto iphambili kwiziko lokuchwetheza. Ubume bayo nempembelelo enkulu ekusebenzeni iziko machining.
3. Inkqubo yolawulo lwamanani
Yenziwe ngesixhobo se-CNC, umlawuli onokucwangciswa, isixhobo sokuqhuba se-servo kunye nemoto. Liziko leziko lokuchwetheza ukwenza isenzo sokulandelelana kunye nolawulo lwenkqubo yokuchwetheza.
4.Ukutshintsha ngesixhobo esizenzekelayo (ATC)
Umahluko obaluleke kakhulu phakathi kweziko loomatshini kunye nesixhobo esiqhelekileyo somatshini kukuba inesakhono sokuqhubekeka iinxalenye kwiinkqubo ezininzi kwaye ineseti yezixhobo ezizenzekelayo eziguqula isixhobo.
5. Inkqubo yolawulo lwamanani
Le yinxalenye engundoqo yomatshini wokugaya we-CNC, owenziwe ngenkqubo yolawulo lwe-CNC, ipaneli yokusebenza, ukubetha ngesandla, umqhubi, iservo motor kunye nentambo yamandla. Ilingana nengqondo yezixhobo zomatshini we-CNC, zonke iinkqubo kunye neekhowudi zihlelwe kwinkqubo ye-CNC.
6. Kufakwe ngokupheleleyo ukhuseleko
Eli candelo lilingana nesikrweqe somatshini we-CNC, onokukhusela isixhobo somatshini kumonakalo wangaphandle, kunye nokukhusela umsebenzisi kunye nendawo yokusebenza kwimpembelelo yesixhobo somatshini. Iphaneli yenkqubo kunye nenxalenye yombane kufuneka ifakwe kuyo.
Ukujikeleza kwe-servo motor akunakuqhuba ngokuthe ngqo i-worktable kunye ne-spindle yokuhamba. Kungenxa yesikere sebhola, ukujikeleza kweemoto, eziguqulwe zaba ngumgama wokuhamba kwetafile. Ibhola iqhosha lemoto kunye neenjini ziqhagamshelene ngokudibanisa. Isikrufu kunye nezinto ezisebenzisekayo zidityaniswe ngamandongomane.
Isikhokelo somgama esi-8
Xa umsebenzi usebenza kwisiseko, inyanzelekile ukuba ivelise ukungqubana ngesixhobo somatshini. Umgaqo wesikhokelo kaloliwe udlala indima yokuthambisa kunye nokunciphisa ukungqubana. Kukho ibhola okanye isakhiwo se-roller ngaphakathi. Inokuqinisekisa ukuchaneka kunye nesantya sokuhamba kwetafile.
9 inkqubo ukuthambisa ajikeleze
Impompo yeoyile ye-elektroniki ihambisa ioyile yokuthambisa kwindawo yokuthambisa yesixhobo somatshini ukuthambisa isikrufu esithwele isixhobo somatshini, ukuze kuphuculwe ukuthembeka kunye nobomi benkonzo yesixhobo somatshini. Inkqubo ukuthambisa ajikeleze yinkqubo oluzenzekelayo elidityaniswe nenkqubo yolawulo ngokwamanani kwaye ilawulwa inkqubo yolawulo ngokwamanani. Ixesha lokuphumla kunye nobungakanani bokuthambisa kunokulawulwa.
Loluphi uhlobo workpiece efanelekileyo processing kunye CNC umshini wokugaya?
Iziko machining CNC inezibonelelo esizisebenzelayo eliphezulu, amandla aphezulu, ngqo phezulu, ngesantya esiphezulu kunye nokuthembeka eliphezulu, kodwa ezi eziluncedo zisekelwe kwiimeko ezithile. Iziko loomatshini linokudlala izibonelelo ezilungileyo kuphela phantsi kweemeko ezifanelekileyo. Ezi zinto zilandelayo zifanelekile kakhulu kumaziko oomatshini.
1. Iinxalenye zibekwa kwimveliso ngamaxesha kwaye iphindaphindwayo
Imfuno yentengiso yeemveliso ezithile iyajikeleza kwaye inamaxesha onyaka. Ukuba kusetyenziswe umgca wemveliso ekhethekileyo, inzuzo ayifanele ilahleko. Ukusebenza ngokukuko kwezixhobo eziqhelekileyo kusezantsi kakhulu, kwaye umgangatho awuzinzanga. Emva kokuba ibhetshi yokuqala (iinxalenye) zeziko lokuchwetheka lisikiwe ngempumelelo, inkqubo kunye nolwazi olufanelekileyo lunokugcinwa, kwaye ukuveliswa kwemveliso elandelayo kunokuqala imveliso ukuba lincinci ixesha lokulungiselela.
2. iindawo ezichanekileyo eziphezulu ezichanekileyo
Amanye amalungu afuna okuncinci, kodwa ayabiza. Azivumelekanga ukuba zikhutshwe. Zifuna ukuchaneka okuphezulu kunye nexesha elifutshane lokwakha. Ukuba isixhobo soomatshini bendabuko sisetyenziselwa ukuqhubekeka, sidinga izixhobo zomatshini ezininzi zokuququzelela umsebenzi, kwaye kulula ukuba sichaphazeleke kwizinto zabantu ukuvelisa izinto ezilahliweyo. Ukuba iziko machining lisetyenziselwa ukuqhubekekiswa, inkqubo yemveliso ilawulwa ngokupheleleyo yinkqubo, ethintela izinto eziphazamisayo kwinkqubo yokuhamba, kwaye inemveliso ephezulu yokusebenza kunye nomgangatho Ubungakanani buzinzile.
3. Iindidi ezininzi kunye namalungu amancinci amancinci
Ukuba bhetyebhetye kwemveliso machining iziko ayibonisi kuphela impendulo ekhawulezileyo kwiimfuno ezizodwa zokulungiswa kwamalungu kodwa inokukhawulezisa ukufezekisa imveliso yobuninzi kwaye ihlale ngokukhawuleza kwimarike.
4. Icandelo elinesakhiwo esimbaxa kunye neenkqubo ezininzi kunye nokulungiswa kwezitishi ezininzi
Ezinye iindawo zinesakhiwo esintsonkothileyo kwaye zifuna inkqubo yenkqubo ebizayo ukuqhubekeka kwizixhobo zomatshini eziqhelekileyo. Ukusetyenziswa komatshini wokugaya we-CNC kukwafuna ukubuyisela izixhobo kunye nezinto ezilungiselelwe amaxesha amaninzi. Sebenzisa iziko machining, kunokwenzeka ukuba ugqibezele ukubhola, wokugaya, ekruqulayo, uthinte, grooving kunye nezinye inkqubo-processing ezininzi ngexesha elinye.
5. Kunzima ukulinganisa iinxalenye
Iziko machining inezibonelelo ngakumbi machining olu hlobo iindawo
Yintoni ikhowudi ye-G kunye neM?
Ikhowudi ye-M idlala umsebenzi oncedisayo kwizixhobo zomatshini ze-CNC. Eminye imisebenzi yokutshintsha ingasetwa ngokusebenzisa imisebenzi encedisayo, enje nge-M3: ujikelezo olujikelezayo olujikelezayo, i-M4: ujikelezo olujikelezayo olujikelezayo, njl.
Ikhowudi ye-G, lungiselela umsebenzi. Ikhowudi ye-G ngumyalelo owenza ukuba umatshini asete imowudi ethile yokusebenza. Ezifana nokufakwa komgama, ukujikeleziswa kwesetyhula, imbuyekezo yezixhobo, ukusekwa kwenkqubo yokulungelelanisa, njalo njalo.
Imiyalelo ye-M kunye nekhowudi ye-G yimisebenzi esisiseko yenkqubo yomatshini we-NC. Ngale khowudi, uthotho lweentshukumo lunokufezekiswa
Kuthatha ixesha elingakanani ukufunda ikhowudi ye-G?
Kuthatha ixesha ukufunda ikhowudi. Akuyomfuneko ukucengceleza yonke ikhowudi. Ungabuza incwadi yereferensi xa uyilibele. Kodwa isitshixo kukulawula ikhowudi nganye yesicelo. Zininzi amanqaku kunye neengcebiso, xa usebenzisa ukuqonda ikhowudi, uya kuqonda ngokuqinileyo kwaye ukhumbule. Khumbula, ungayikhumbuli ikhowudi, ubukhulu becala malunga nokuba ubuchule besicelo bunjani. Iikhowudi ezininzi zihlala zihleli.
Ngokweziseko ezahlukeneyo zabafundi, ixesha lokufunda lenkqubo ye-CNC nalo lahlukile, elihlala lithatha iinyanga ezininzi okanye neminyaka.
Uvavanyo lwemihla ngemihla
Uvavanyo lwemihla ngemihla: xa uqhuba umatshini, jonga ezi zinto zilandelayo nganye nganye. Ukuba kukho nakuphi na ukungaqheleki okufumanekayo, khangela unobangela ngoko nangoko uze emva koko ukususe. Kwimeko yeengxaki ezingenakusonjululwa, nceda wazise inkampani yethu ngokukhawuleza ukuze kupheliswe ukungaqheleki ngokukhawuleza.
1.1 ngaphambi kokuqalisa
1) Jonga ukuba ngaba umgca wamandla, yonke imigca, kunye namalungu ombhobho onakele okanye akanakunxibelelana kakuhle.
2) Jonga ukuba ioyile yokuthambisa mayongezwe kwinqanaba leoyile kwimpompo yeoyile yokuthambisa kunye nokuba inqanaba leoyile eliqhelekileyo kwibhokisi yezixhobo zentshulube liqhelekile na kwimagazini yezixhobo ethe nkqo.
3) Jonga ukuba indibaniselwano enamanqaku amathathu iqhelekile.
4) Jonga umbhobho weoyile kunye nokudityaniswa kokuvuza kweoyile.
5) Jonga ukuba uxinzelelo lomoya lwendibaniso yamanqaku amathathu luqhelekile kwaye ukuba utshintsho koxinzelelo luhlengahlengisiwe njengoko kufuneka.
6) Jonga ukuba ngaba ulwelo lokusika itanki lamanzi kufuneka longeze ukusika ulwelo.
7) Jonga ukuba ngaba isixhobo sokhuselo siqhelekileyo na kwaye sithembekile, kwaye akufuneki kubekho basebenzi kwindawo eyingozi.
2.1 emva kokuqalisa
1) Jonga ukuba ngaba ubushushu be-spindle buqhelekileyo na nokuba kukho isandi esingaqhelekanga.
2) Jonga ukuba ngaba ezi zinto zilandelayo zimpompo yeoyile yokuthambisa ziqhelekile.
a. Uxinzelelo lonikezelo lweoyile luphakathi kwe-3kfg / cm2-4kfg / cm2
b. Nokuba ukusetyenziswa kweoyile yokuthambisa kuyinto eqhelekileyo (ukuba ukusetyenziswa kuyakhawuleza kakhulu, isekethe yeoyile kufuneka ihlolwe ukuvuza kweoyile).
c. Nokuba ixesha lokusebenza kwempompo yeoli liqhelekile (kucetyiswa i-3-6cc / ixesha / imizuzu emi-5).
3) Jonga ukuba inkqubo yokuqhubekeka igqityiwe.
4) Khangela ukuba isixhobo machining lugqityiwe.
5) Jonga ukuba i-fixture itshintshile na nokuba i-datum yayo itshintshile.
6) Nika ingqalelo ukuba isiguquli sivelisa ubushushu obuphezulu nangaliphi na ixesha.
7) Soloko ubeke amanzi kwisihluzi kumdibaniso wamanqaku amathathu ukuqinisekisa ukuba irhasi yomile.
8) Nokuba ukuvuthwa kokuluka kuyinto eqhelekileyo.
1.3 emva kokusebenza
1) Susa zonke iichips etafileni, ikhuselo elinemigangatho emithathu, itanki lamanzi, isihluzo sesikrini kunye nekhaka elikhulu.
2) Umngxunya wangaphakathi wentonga yokuluka kufuneka wosulwe ucoceke.
3) Ukufakwa kwisiphatho kufuneka kususwe nangaliphi na ixesha kunye neeyure ezi-8.
4) Hambisa i-axis ezintathu embindini wokubetha ukuze ugcine ibhalansi.
5) Emva kokufaka i-oyile enobungqina bokurusa kwindawo yokusebenza, susa iichips.
6) Emva kokuphela kokutshintsha, ukubonakala komatshini wonke kufuneka kucocwe kube kanye.
7) Jonga ukuba iingcango zokhuseleko zivaliwe ngokufanelekileyo.
8) Jonga ukuba ngaba umbane ucinyiwe.
9) Jonga ukuba ngaba utshintsho kumthombo wamandla lucimile.
2 ulondolozo rhoqo
2.1 imiyalelo yolondolozo
1) Ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzi wolondolozo, zonke iingcango zombane kunye nezikhuselo kufuneka zivaliwe, ngakumbi ibhokisi yolawulo kunye nebhokisi yokusebenza.
2) Akuvunyelwe ukusebenzisa umpu womoya okanye umoya ocinezelweyo ukucoca isixhobo somatshini (ukuthintela inkunkuma kunye nothuli oluvuthela kwi-bearing okanye kwisilayidi).
3) Ngaphambi kokwenza ulondolozo kunye nomsebenzi wokulungisa ngaphezulu nangasemva kwesixhobo somatshini kwisikhuselo sokhuselo, qiniseka ukucima iswitshi yamandla kwiphaneli yokusebenza, emva koko ucime umbane. Kwangelo xesha, xhoma imiqondiso yesilumkiso ukunqanda abanye ukuvula umatshini.
2.2 ulondolozo lwemihla ngemihla
1) Susa iichips, uthuli kunye neesundries kuwo onke amalungu abonakalayo esixhobo somatshini kunye nesixhobo, kwaye ususe iichips, uthuli kunye neesundries kwisixhobo sokulungelelanisa okanye esinye isixhobo esincedisayo.
2) Coca wazala othwala.
3) Jonga ukuba inqanaba leoyile lempompo yeoyile yokuthambisa ifuna ukongeza ioyile entsha nokuba uxinzelelo lweoyile lukuluhlu oluchaziweyo (3-5kgf / cm2).
4) Jonga ukuphakama kwenqanaba leoyile yamanqaku amathathu okudibanisa itanki ukubona ukuba ioyile entsha ifuna ukongezwa.
5) Jonga ukuba amanzi okucoca ulwalamano kumanqaku amathathu akhutshiwe ngokupheleleyo.
6) Jonga ukuba uxinzelelo lomoya lwesekethe yomoya luqhelekile (ixabiso ≥ 6 kgf / cm2).
7) Jonga ukuba ngaba kukho ukuvuza kweoyile kwisekethe yeoyile kunye nokudibana, kwaye uthathe unyango olufanelekileyo.
8) Coca indawo yokubamba kwisiphatho ngasinye semagazini.
9) Jonga ukuba ulwelo lokusika kufuneka longezwe kwaye uqalise umatshini ukujonga ukuba ngaba indlela yokupholisa isebenza ngesiqhelo.
10) Ukucoca iindawo zombane ezicacileyo kunye nokutshintsha komda.
11) Jonga ukuba zonke izibane zomsebenzi okanye izibane ezilumkisayo ziqhelekileyo.
12) Gcina okusingqongileyo okujikeleze umatshini kucocekile kwaye kucocekile.
13) Jonga ikhefu ngenxa yokufakwa kakhulu kwekhabhoni.
2.3 ulondolozo lweveki
1) Yenza ulondolozo lwemihla ngemihla
2) Jonga umphezulu wentonga yokuluka kunye nezinye izinto ezibalekayo kwisandi esingaqhelekanga kunye nomonakalo, kwaye ucoce ujikeleze othini lokuluka.
3) Jonga ukuba imvelaphi ye-axis nganye iyaphuma na.
4) Coca isihluzo setanki lamanzi, kwaye ungeze isipholisi xa singonelanga.
5) Coca indawo yokuhluza enendawo ezintathu.
6) Qinisekisa ukuba into yokubamba yokuluka kunye nokukhulula isenzo sihamba kakuhle.
7) Qinisekisa ukuba ngaba utshintsho lwezixhobo alugudanga.
8) Jonga ukuba ngaba impompo yokuthambisa isebenza ngokwesiqhelo (3-6cc / ixesha / imizuzu emi-5, uxinzelelo lweoyile 3-5kfg / cm2).
2.4 ulondolozo lwenyanga
1) Yenza ulondolozo lweveki.
2) Coca ngaphakathi kwebhokisi yolawulo, ipaneli yokusebenza kunye nococo lwekhusi lobushushu.
3) Jonga inqanaba lezinto ezisetyenziswayo kwaye uqiniseke ukuba iibholiti ze-ankile zitshixiwe.
4) Jonga ukuba umgca wesikhokelo se-axis ezintathu ufuna ukulungiswa.
5) Jonga umsebenzi we-valve ye-solenoid kunye nokutshintsha komda.
6) Coca ibrashi yomgaqo kaloliwe wesikhokelo se-axis ezintathu kwaye uyihlaziye xa kukho imfuneko.
7) Jonga unxibelelwano olubi xa isinxibelelanisi socingo sikhululekile.
8) Jonga ukuba isekethe yeoyile ayisebenzi, kwaye ucoce isihluzo sesikrini kwindibaniselwano apho ingathintelwanga khona.
9) Jonga ukuba isixhobo sokungena kunye nesibali-xesha ziqhelekile, jonga ukuba ngaba umaphuli unoxinzelelo olufanelekileyo kwaye uyicoce.
10) Ukucoca ulwelo lokusika, coca itanki yamanzi kunye nombhobho wamanzi, emva koko ufake ulwelo lokusika.
11) Qinisekisa ukuba umlawuli we-NC usebenza ngokwesiqhelo.
I-12) Gcoba i-shaft ye-counterweight shaft shaft kanye ngenyanga.
2.5 ulondolozo lwesiqingatha sonyaka
1) Yenza ulondolozo lwenyanga
2) Ukucoca iyunithi ye-NC, iyunithi yolawulo, kunye nesixhobo somatshini.
3) Faka ioyile yokuthambisa yenkqubo yoxinzelelo lweoyile, thambisa ibhokisi yebhokisi yemagazini yesixhobo esicocekileyo kwaye ucoce indawo yangaphakathi.
4) Jonga ukususwa ngasemva kweeshafti ezintathu kwaye ulungelelanise.
5) Jonga isixa segridi ye-axis ezintathu kwaye uyihlengahlengise.
Ulondolozo lonyaka lwe-2.6
1) Coca zonke iinjini.
2) Jonga ukuba utshintsho lolawulo kwipaneli yokusebenza lubuthathaka kwaye luqhelekile.
3) Jonga ukuba inkqubo yovavanyo isebenza kakuhle.
4) Misela ukuba ingaba ikhonkco lokulwa ubunzima lisetyenziswa ngesiqhelo.
5) Susa idipozithi yekhabhoni kunxibelelwano lwazo zonke izinto ezingasebenziyo kwibhokisi yombane kwaye uyisule icocekile.
Iinxalenye ezi-3 zokutshintshwa kunye nokugcinwa
3.1 lo msebenzi ulandelayo kufuneka wenziwe ngaphambi kokubuyisela amanye amalungu.
1) Bhala inombolo yomatshini.
2) Yenza inqaku lenkcazo kunye negama lophawu lwamalungu atshintshiweyo.
3) Phawula ubudlelwane bendawo phakathi kwenxalenye kunye nezinye izinto ezinxulumene noko, ukuze uphinde udibane kakuhle.
3.2 izilumkiso kulondolozo
1) Abasebenzi bolondolozo kufuneka baqonde amanyathelo okuvala kwaye benze umsebenzi wokulungisa emva kovalo.
2) Xa ulungisa ingaphakathi:
a. Cima umbane kuqala;
b. Ukuba kunyanzelekile ukuba uvule ulondolozo, tshixa umatshini kuqala emva koko ungene ngaphakathi;
c. Susa iichips ezinokuyinyathela okanye ziyichukumise indawo ukuthintela ukuba zingakhukuliswa ziichips;
d. Sula ioyile yokuthambisa kunye nolwelo lwe-chip kwiindawo onokunyathela kuzo ukuthintela ukutyibilika.
3) Emva kokuba icandelo elitsha lithathelwe indawo, akuvumelekanga ukulahla icandelo elidala ngaphambi kokuqinisekisa ukusebenza kwalo kwesiqhelo.
3.3 amalungelo olondolozo noxanduva
1) Imicimbi evunyelwe ukuphathwa ngabaqhubi ngokwabo:
a. Isikulufa kunye neephepha zentsimbi ezichaphazela ukuchaneka kwezixhobo zomatshini.
b. Izinto ezilula ezithengiweyo, ezinje ngefuse, iswitshi, isekethe yeoyile, ukudityaniswa kombhobho, njl.
2) Abasebenzi abanamabanga emfundo oqeqesho bayafuneka kulungiselelwa lo msebenzi ulandelayo:
a. Ukubaleka kokujija okugqithisileyo;
b. Intonga yokuluka inesandi esingaqhelekanga;
c. Isikhokelo sokugcina isikhonkwane;
d. Ukugcinwa kwezinto zokuhambisa ii-axis ezintathu (isihlalo sokuhambisa, isitulo se-nut, inkxaso ye-screw kunye nokuzala, njl.).
e. Isixhobo sokugcina iimagazini.
f. Ukuphathwa kwemela yokuwisa kunye nokudibana